Alphabet yechiGerman, Alphabet yechiGerman, Das Deutsche Alphabet
Muchidzidzo chedu cheGerman Alphabet, tichaongorora mavara ari muchiGerman, tichiongorora mavara echiGerman, tichadzidzawo kududzwa kwemavara ari muchiGerman alfabheti setsamba yakazvimiririra uye madudziro avo mushoko. Alphabet yechiGerman i.e. das Deutsche Alphabet Kudzidzisa kwakakosha zvakanyanya kune vanotanga kudzidza chiGerman, kunofanirwa kudzidzwa nemazvo.
Panguva ino, tichaona mataurirwo anouya pamwe nemamwe mavara echiGerman, Tichaona mavara muchiGerman asiri muchiTurkey, uye mabhii muTurkey asiri muchiGerman., tichasimbisa zvatataura nemienzaniso uye pakupedzisira tichapedzisa musoro wedu neGerman alphabet subject test.
German Alphabet: Min 20 Minutes
Kune avo: Dzidzo yepuraimari uye Sekondari Vadzidzi, 9th Giredhi Vadzidzi, Vanotanga kuGerman
Pashure pokunyatsoongorora shanduro yedu yechiGerman mutsara, tinokukurudzira kuti ugadzirise mini-test pamugumo wehurukuro yedu. Zvino ngatitange nokuongorora shanduro yechiGermany.
Kutanga, ngationei mabhii ari muarufabheti yechiGerman pamwe chete mutafura, tozoongorora mabhii rimwe nerimwe. Kune makumi matatu mavara muarufabheti yechiGerman pamwe chete neakakosha mavara. Kune mavara makumi maviri nematanhatu uye mana akakosha mavara muarufabheti yechiGerman.
a: mm g: ge m: em r: er w: isu
d: de j: yot ö: am u: uu z: set
e: ee k: ka p: pe ü: ü ä: ae
f: ef l: the q: qu v: fau ß: is set
Wongorora ese mabhii epasi uye makuru mumavara echiGerman zvakanyatso kubva pamufananidzo wearufabheti yechiGerman pazasi
Alphabet yechiGerman - Tsamba dzeGerman
Kune mavara makumi maviri nematanhatu uye mana akakosha mavara muchiGerman. yeaya mavara akakosha Mavara Ä, Ö uye Ü iumlaut mafomu emabhii A, O uye U. Kazhinji, haina kuratidzwa mumarufabheti, inoratidzwa zvakasiyana.
Tsamba ß (estset) inoreva zvakare zvakapetwa s. Izvo zvinoonekwawo kuti SS (double s) yakanyorwa pachinzvimbo cheiyi tsamba mune dzimwe nzvimbo. Tsamba ß inogara yakanyorwa nemavara madiki, kana iri mumusoro, yakanyorwa seSS. Semuenzaniso, kana ese mabhii ezwi rine tsamba ß achizobatwa, tsamba ß inofanirwa kunyorwa seSS.
Iyo huru yetsamba i muchiGerman ndiyo tsamba ini, kwete iyo tsamba I. Hukuru i tsamba (İ) inowanikwa muTurkey asi kwete muchiGerman. Tsamba yepasi ini ndinowanikwawo muTurkey asi kwete muchiGerman. Senge muChirungu, tsamba R muchiGerman kazhinji haina kutaurwa mukumanikidza kwakanyanya.
Kuverenga nekunyorwa kwemashoko muGermany
Tarisa uone mufananidzo watakakugadzirira.
Iye zvino ngationei tsamba dziri muchiAlfabheti zvinyorwa pamwe nematauro avo:
Tsamba dzaiva mumutauro wechiGerman dzinoverengwa uye dzinodhindwa sepamusoro.
Kana mumwe munhu akakukumbira kuti uwedzere zita rako, unofanirwa kuvhara mazita muzita rako rimwe nerimwe sepamusoro.
Takati hapana mavara Ç, Ğ, İ, Ş mumutauro wechiGerman. Kana paine tsamba iri muzita rako isiri mumavara echiGerman, senge Ç-Ğ-Ş, senge mienzaniso yeMODERN, YAĞMUR, ÇAĞLA, mavara aya anonyorerwa muchiGerman pasina madonhwe. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kunyora tsamba Ç seC, Ğ seG, uye Ş saS.
Tsamba yechiGerman Coding
Tsamba mumutauro wechiGerman uye kwete muTurkish Alphabet
Tsamba Q, W, X, Ä, ß mumutauro wechiGerman zvisiri mumutauro weTurkey.
Tsamba muTurkish Alphabet uye kwete muchiGerman Alphabet
Tsamba dzakadai sa Ç, ", Ş, İ, ı mumutauro weTurkey hazviri muGerman chimiro.
Kuverenga German Letters muShoko
Kuverenga kunotevera kunowanzoshandiswa kana mamwe tsamba ari kurutivi rumwe neshoko:
ei : Kana tsamba e uye ini ndikaonekwa pamwe chete ay verenga se
ie : Kana tsamba i uye e vauya pamwe chete i verenga se
eu : Kana tsamba e uye iwe iri pedyo nemumwe oy verenga se
sch : tsamba s, tsamba c uye tsamba h ş verenga se
ch : Kana tsamba c na h iri pedyo nemumwe h verenga se
z : tsamba z muzwi ts verenga se
au : Kana tsamba i uye iwe iri pedyo nemumwe o verenga se
ph : Kana tsamba p uye h iri pedyo nemumwe f verenga se
sp : Kana tsamba s uye p dziri pedyo nemumwe zvakakomba pfungwa nomuviri zvemwana asati verenga se
st : Kana tsamba s uye t zvichionekwa pamwe chete PIB verenga se
s : s iri pakutanga kwezwi z akafanana, kana pakuguma s verenga se
Kune zvishoma zvisiri pamutemo wepamusoro wekuverenga, kunyange zvazvo mamwe emashoko aya achionekwa pamwe chete, kunyange zvazvo tsamba dzichigona kuverengwa pakutanga kana kuti kuguma kweshoko.
Mufananidzo unotevera unoratidza kuti mashoko aya anoverengwa sei nedzimwe tsamba dzinouya pamwe chete.
Nzira Yokuverenga nayo Jerman Words
Maitiro Ekuverenga Tsamba dzeGerman
Cherechedza: Inowanikwa mumutauro wechiGermany ä, ü, ö initials (AUO(umlaut).
Shamwari dzisina mhando dzakasiyana pamakirinhi awo dzinogona kunyora idzi tsamba pamakombiyuta avo vachishandisa zviyero izvi zvinotevera.
ä character: ALT + 132 (Alt + 132 zvinoreva kukurira Alt uye kuisa 132)
ß chimiro ALT + 225
Shamwari dzedu dzisiri dzeTurkey dzinogonawo kushandisa vanhu veTurkey sezvinotevera:
Tsananguro yedu yechiGerman alphabet ndiyo yakawanda ikozvino, shamwari dzinodiwa. Nekudzidza alfabheti yechiGerman zvakanaka, unofanirwa kubata mavara nemusoro, dzidza mataurirwo emavara echiGerman uye kunyanya mataurirwo anoitika kana mamwe mavara akaungana muchiGerman. Mushure mekudzidza mabhii echiGerman, unogona kuenderera nezvimwe zvidzidzo.
Iwe unogona kunyora chero mibvunzo uye makomendi nezve edu echiGerman zvidzidzo pane almancax maforamu kana muchikamu chemashoko pazasi. Yese mibvunzo yako ichapindurwa nealmancax varairidzi.
Vadikani shamwari, kana muchida German Forums Sezvo uri nhengo iwe unogonawo kugovera zvese zveGermany.
Iyezvino kuti iwe wakadzidza chiGerman chirafu German articles Unogona kutarisa chidzidzo chedu.
Kana iwe usingazivi kuti iwe unotevera zvidzidzo zveGerman German lecturesUnogona kutarisa yedu. Zvinokwanisika kutevera zvidzidzo zvedu zveGermany nhanho nhanho mune iyi hurongwa. Watora danho rekutanga kudzidza chiGerman.
10th giredhi German alphabet10. kirasi german nyaya inotaura9th giredhi German alphabet9. kirasi german nyaya inotauraGerman alphabetGerman abcGerman alphabetGerman alphabetGerman lettersmataurirwo emavara echiGerman
rudo anodaro 9 apfuura
Tugba anodaro 9 apfuura
Yakanga iri kujekesa zvikuru, ndinokutendai
Seyda anodaro 9 apfuura
guru site.healthy food :))
Bata Ali zvakananga anodaro 7 apfuura
Ndinofunga kuti inofanira kunge ichiwedzerwa mberi, shamwari.
enes anodaro 7 apfuura
Ndinofunga kuti vanogona kuvandudza.
Muenzaniso: Nur Nur Acar anodaro 7 apfuura
Ndiri kudzidza kuongororwa.
rambidza anodaro 7 apfuura
Rabie anodaro 7 apfuura
Ndinofunga kuti zvinonakidza
turgutxnumx anodaro 6 apfuura
KaaN anodaro 4 apfuura
chinoshamisa German alphabet
mudziyo anodaro 6 apfuura
Icho chiGerman chete hachisi Chingerezi. Uye muridzi wepaiti anotaura Turkish.
EyÜp anodaro 4 apfuura
alfabheti yechiGerman, tsamba dzakanaka mumakalata echierman
Ndiri kurwara nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzisina maturo